I-China i-Automatic 6 yeentloko zeTomato / iSauce yeChilli yeeJas zeglasi / iBhotile yokuFaka i-Bottle yokutywina umzi-mveliso kunye nabavelisi |TSIBA
Ukuzenzekela 6 Iintloko zeTomato / iSauce yeChilli yeeJas zeglasi / umatshini wokutywina webhotile
Iglasi, isinyithi, iplastiki
I-APPAREL, isiselo, i-Chemical, iMveliso, uKutya, oomatshini kunye ne-Hardware, i-MEDICAL
Iibhotile, ibhotile yeglasi, iingqayi
Inkxaso ye-Intanethi, Inkxaso yobugcisa beVidiyo, iindawo ezisecaleni zasimahla, Ufakelo lwasebaleni, ukugunyaziswa noqeqesho, Ukugcinwa kwentsimi kunye nenkonzo yokulungisa
Unyaka o-1, iminyaka eyi-1
umatshini wokuzalisa ibhotile yeglasi
Ukuzalisa ukutywinwa kweCapping
IyazenzekelaUmatshini wokutywina webhotile
Isiselo, jam, juice Packaging
Ulwelo oluqukuqelayo, coma
iStainless Steel 304
ibhotile yeglasi / ijagi, iibhotile zeplastiki
I-5 iSeti / iSeti kwiNyanga nganye yomatshini wokuzalisa ibhotile yeglasi
Est.Ixesha (iintsuku) 60 Kuya kuthethathethwana
ngokuzenzekelayo iintloko ezi-6 zetumata / iitshilisi zesosi yeglasi iingqayi / umatshini wokutywina wokuzalisa ibhotile
Hlamba ibhotile yebhanti yokuhambisa kunye nesixhobo sokutyisa isikrufu kwisistim, ugcwalise ngokuzenzekelayo umsebenzi womlomo wokutywina.Ifanelekile kwiibhotile zeglasi zeplastiki zokuzaliswa kwamanzi kunye nokutywinwa.
1. Ukubonakala ngokubanzi kwesakhiwo sensimbi engenasici, i-compact kunye nenhle, ukuzalisa inqanaba lolwelo oluzenzekelayo ulawulo, ukuphakama kwenqanaba le-liquid kulungelelaniswa.
2. Isilawuli esicwangcisiweyo se-LG sokulawula, ukulawulwa kwesantya sotyalo-mali esingena-stepless, umgca wojongano oluphambili lomntu othembekileyo.
3. Indlela yokutywina yokuzalisa i-Rotary, akukho bhotile akukho ukugubungela imibutho, ukuqinisekisa ukuba ukutywinwa kunokwethenjelwa.
4. Isixhobo samandla emagnethi, i-screw-top torque ehlengahlengiswayo ngokuthanda, bamba isigqubuthelo sokutywina isantya esifanelekileyo siphezulu.
oomatshini abathengisa shushu
Ukuvuthela komoya kunye noomatshini bokuhlamba
1 Isetyenziselwa ukuhlamba itumato entsha, iqunube, imango, njl.
2 Uyilo olukhethekileyo lokusefa kunye nokubhubhuza ukuqinisekisa ngokucoca kunye nokunciphisa umonakalo kwisiqhamo ngokunjalo.
3 Ilungele iintlobo ezininzi zeziqhamo okanye imifuno, njengetumata, iqunube, iapile, imango, njl.
Ukuxobula, ukucofa kunye nokuCoca iMonobloc (iPulper)
1. Iyunithi inokuxobula, i-pulp kunye nokucokisa iziqhamo kunye.
2. Ukuvuleka kwesikrini se-strainer kunokulungiswa (utshintsho) ngokusekelwe kwimfuno yomthengi.
3. I-teknoloji yaseNtaliyane ehlanganisiweyo, umgangatho ophezulu wensimbi engenasici ekudibaneni nezinto zeziqhamo.
Isixhobo sokucofa ibhanti
1. Isetyenziswa kakhulu ekutsaleni nasekukhupheni amanzi emzimbeni kwiindidi ezininzi ze-acinus, iziqhamo zepip, kunye nemifuno.
2. iyunithi yamkele itekhnoloji ephucukileyo, ushicilelo olukhulu kunye nokusebenza kakuhle okuphezulu, inqanaba eliphezulu lokuzenzekelayo, kulula ukuyisebenzisa kunye nokugcina.
3. izinga lokutsalwa linokufumana i-75-85% (ngokusekelwe kwizinto eziluhlaza)
4. utyalo-mali oluphantsi kunye nokusebenza kakuhle
1. Ukuvula i-enzyme kunye nokukhusela umbala wokunamathisela.
2. Ukulawula ubushushu obuzenzekelayo kunye nobushushu obungaphandle bulungelelaniswa.
3. Isakhiwo se-Multi-tubular esinekhava ekupheleni
4. Ukuba umphumo we-preheat kunye nokucima i-enzyme ayiphumelelanga okanye ayaneleyo, ukuhamba kwemveliso kubuyela kwi-tube kwakhona ngokuzenzekelayo.
1. Iiyunithi zokunyanga ubushushu obunokulungiswa kunye nokulawulwa ngokuthe ngqo.
2. Ixesha elifutshane kakhulu lokuhlala, ubukho befilimu encinci kunye nobude bonke beetyhubhu kunciphisa ukubamba kunye nexesha lokuhlala.
3. Uyilo olukhethekileyo lweenkqubo zokusabalalisa ulwelo ukuze kuqinisekiswe ukugqunywa kwetyhubhu echanekileyo.Ukutya kungena phezulu kwe-calandria apho umthengisi uqinisekisa ukubunjwa kwefilimu kwindawo yangaphakathi yombhobho ngamnye.
4. Ukuhamba komphunga ku-co-current kulwelo kunye nokutsalwa komphunga kuphucula ukuhanjiswa kobushushu.Umphunga kunye nolwelo oluseleyo lwahlulwe kwisahluli senkanyamba.
5. Uyilo olusebenzayo lwabahluli.
6. Ulungiselelo lweempembelelo ezininzi lubonelela ngoqoqosho lomphunga.
Ityhubhu kwi-tube sterilizer
1. I-united iqulethwe itanki yokufumana imveliso, itanki yamanzi eshushu kakhulu, iimpompo, imveliso yokucoca kabini, inkqubo yokuvelisa amanzi e-tubular superheated, ityhubhu kwi-tube heat exchanger, inkqubo yokulawula i-PLC, iKhabhinethi yokulawula, i-steam inlet system, i-valve kunye neenzwa, njl.
2. Itekhnoloji ehlanganisiweyo yase-Italiya kwaye ihambelana ne-Euro-standard
3. Indawo enkulu yokutshintsha ubushushu, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi kunye nokugcinwa lula
4. Yamkela itekhnoloji ye-welding yesipili kwaye ugcine ukudibanisa kombhobho ogudileyo
5. Ukuzibuyisela umva ukuba akwanelanga ukuvala inzala
6. I-CIP kunye ne-auto SIP ekhoyo kunye ne-aseptic filler
7. Inqanaba lolwelo kunye netempile elawulwa ngexesha lokwenyani
Ngaphambili: I-300 yeGallon ye-Aseptic Bag yokuzalisa uMshini
Okulandelayo: Umatshini wokuPakisha iBag encinci ozenzekelayo
I-Automatic Yogurt Jam Blister Cup itywina iM...
Zonke izitayile zoomatshini wokutywina weKhathoni oPhezulu...
Umatshini wokuzalisa i-Aseptic yeSiqhamo seJam Paste
50kg-220kg Ibhegi yeAseptic yeTomato yokuFaka iMac...
Ukupakisha iKeyiki yokuGcwalisa oomatshini bokutywina kunye ne...